अस्पतालमा उपचाररत विपन्नलाई समाजवादी युवा संघको समन्वयमा आर्थिक सहयोग
बलिराम यादव , २०७७ चैत ३, मङ्गलबार,०६:२९:PM
वीरगंज, ०३ चैत्र। समाजवादी युवासंघ पर्साले दुर्घटनामा परी अस्पतालको बेडमा उपचाररत रहेका एक विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । आर्थिक अवस्था दयनीय रहेका रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका टिपही घर भएका उमेर १२ का राजकुमारका परिवारलाई युवासंघ पर्साले अस्पतालमै पुगी रु. १० हजार आर्थिक सहयोग गरेको हो ।
वीरगजस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना रहेका राजकुमारको तत्काल मस्तिष्क पक्षघात शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएकोले उपचारको रकम जुटाउन समस्या भएपछि समाजवादी युवा संघको विशेष पहलमा यादव समाज सेवा टिम मलेसियाले रु. १० हजार सहयोग गरेको छ ।
यादव समाज सेवा टिम मलेसियाले उपलब्ध गराएको सो सहयोगको रकम समाजवादी युवासंघ पर्साका अध्यक्ष गौरव बर्मासहितको युवा टोलीले अस्पतालमै पुगेर पीडितका बुवा राजीव यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
समाजवादी युवासंघ पर्साका उपाध्यक्ष सरफरोज आलम, मनमोहन पाण्डे, समाजवादी विद्यार्थी युनियन पर्साका सचिव राजकुमार गिरी विद्यार्थी नेता अजय पटेल लगायतले सहयोग रकम प्रदान गरेका थिए।